Ogaden News Agency (ONA) – Barnaamijka Xogwaran Waa barnaamij aan ku eegi doono dhaqdhaqaaqa Jaaliyadaha.
Barnaamijka Xogwaran Waa barnaamij aan ku eegi doono dhaqdhaqaaqa Jaaliyadaha.
Waxa aan wareysiyo iyo xogwaran ku aadan jaaliyadaha somalida Ogadeniya oo ka kooban ururo bulsho oo leh ururo dhaliyaro, ururo haween, haayado samafal, kuwo xuquuqul insaan iyo qeybaha kale ee bulshadaba aan idiinka soo diyaarinay dhaqdhaqaaqa jaaliyadaha somalida ogadeniya ugu jiraan Halganka ummada somalida Ogadeniya ee gumeysi diidka ah.
Hadaba barnaamijkan waxa la socodsiinayna aqristayasha shabakada ONA inay lasocdaan barnaamijyadaas aragtidoodana ay ka dhiibtaan.
barnaamijyadan ugu horeeya ayaa waxa ku bilaabi doona Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee Wadamada Europe. Jaaliyadihii ugu horeeyay ee ka asaasma anaga oo ku xijisiin doona jaaliyadihi ugu danbeyay ee ka asaasmay kuwaas oo u adeega danaha buslahda somalida Ogadeniya ee wadamadan nabadgalyada usoo doontay.
Waxa kale oo barnaamijkan aan faaqidaad iyo faaloyin ka sameyn doona Jaaliyadaha Ogadeniya oo sanad kasta kulanweyne isugu yimada qaarad kamid ah qaaradaha Adduunka. Waxaa sanadkii 2010 la isugu tagay wadanka Sweden, Sanadkii xigay ee 2011 waxaa calanka ogadeniya ka babanayay wadanka Australiya iyada oo eegana uu bilowday calanka ogadeniya inuu ka babado sanadkan 2012 qaaraha North America gaar ahaan Canada. Waxaana soo baxday maah maahda ah- Calanka Ogadeniya Cadceedu kama dhacdo, oo waxa jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ay ka hirgaleen dhamaanba 5 qaaradood ee aduunka oo si xawli ah ay shaqoyinkoodu uga socdaan.
Jaaliyadaha Ogadeniya ayaa shaqooyinka ugu badan ay qabtaan kasokow isdhexgalka iyo noloshooda ay ku xasilanayaan wadamada ay ku noolyihiin waxa ay qabtaan, kulamo waaweyn oo abaabul ah oo lagu wargalinayo bulshada xaalada dhulka Ogadeniya. kulamadaas ayaa ah mid dhaqameed oo umada dhaqankooda lagu adkeynayo, mid siyaasadeed oo dadweynaha caalamka lagu wargalinayo iyo mid gubaabo ku aadan umada gumeysiga ku hoos jira ee ogadeniya laftooda ku aadan.
sidoo kale waxay qabtaan banaanbaxyo ay ku mujinayaan qadiyada Ogadeniya, kagana hortagayaan gumeysiga. Waxaa meelo badan lagu fashiliyay gumeysiga oo koodi ugu weyna Meles Bidaar xattaa laga ceydhasaday maflaxyada caalamka. Sidoo kale waxa banaanbaxyadan lagaga hortaga dhaqalaha lasiiyo gumeysiga Ethiopia iyada oo codka shacabka umada dulman ee somalida Ogadeniya lagu gaadhsinayo wadamada deeqda siiya Ethiopia taasna waxay keentay in dib loga fiirsado dhaqalaha lasiyo Ethiopia su’alo badana ay ka taagantahay illaa news-ka caalamka lagusoo qaato arrimahaas.
Waxaa kale oo Jaliyaduhu ay qabtaan barnaamijyo kale oo badan oo aad kawada dhugan doontaan Barnaamijkan xiisaha badan ee loogu magac daray Barnaamijka Xogwaran ee Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya: Calanka Ogadeniya Cadceedu kama dhacdo.
Akhristayaal barnaamijkan waxaad ku baran doontaan Jaaliyadihina caalamka ka jira noloshooda iyo dhaq-dhaqaaqooda intaba.
Waxaana barnaamijka Ugu horeeya kusoo qaadan doona Wadanka Sweden..oo kamid ah Jaaliyadihii ugu horeyay ee Somalida Ogadeniya ee ka hirgala Qaarada Europe.